काठमाडौं, २ कात्तिक । ‘सम्भव छ- केन्द्र प्रदेश, स्थानीय, सबैले बिधायकी योगदान बिना तलब लिने स्वयंसेवी राजनीतिको प्रचलन स्थापित गरौं- स्विट्जरलेन्डजस्तो । अन्यथा- स्थानीयलाई मात्र पारिश्रामिक रोक्ने सर्वोच्चको फैसला उचित लागेन मलाई त । यो त ठूलालाई पोस्ने, सानालाई चुस्ने नीति भैगो नि ।’
यो प्रस्ताव हो- राजनीतिक विश्लेषक तथा समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डम्बर खतिवडाको । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिने अभ्यासलाई असंवैधानिक हुने फैसला गरेपछि यसबारे फरक फरक जोड र कोणबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ । खतिवडा संघीय र प्रदेश तहका प्रतिनिधिले पनि सुविधा लिन नहुने कि भने तलैसम्म दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
एकराज खनालको तर्क छ, ‘यो संघीयता भनेको त परजिवि उत्पादन गर्ने कारखाना पो रहेछ । केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मका सबै नेताहरु आसेपासे झोले चाकडीबाजहरु मिलेर कसरी कहाँबाट भष्ट्राचार गर्ने, कसरी जनता ढाँट्ने, कसरी लुटने भन्दा अरु केही नगरेको नभएको देखियो ।’ खनालको तर्क संघीयताको विकृत अभ्यासप्रति लक्षित देखिन्छ ।
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले जनप्रतिनिधिलाई तलब नदिने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध रोष नै प्रकट गरे । यसबारे अदालतलाई कुनै सरोकार नै नभएको उनको तर्क छ ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबरा अद्भूत दिमागका मालिक हुनुहुन्छ । उहाँलाई लाग्याे कि यी साना जन-प्रतिनिधिले ब्यर्थमा तलब खान्छन । किनदिने यिनीहरूलाई तलब? अाजदेखि तलब बन्द ।
तलब बन्द भएपछि भ्रष्टाचार दुगुना बढला । के सराेकार भाे सर्बाेच्चकाे त्यसमा?
— Kishore Nepal (@kishorenepal) October 18, 2019
उता नेकपा नेता तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अदालतको फैसला असंगतिपूर्ण भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै प्रतिक्रिया दिए ।
शोभा पौडेल जिसी ट्वीट सन्देशमार्फत् अदालतको यस्तो निर्णयले भ्रष्टाचार थप मौलाउने बताउँछिन् । सबैले घर चलाउनुपर्ने र यत्तिकै कसैले पनि जनताको सेवा गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
झट्ट सुन्दा वाह अदालतको निर्णय कस्तो गजबको 👍तर यो कार्यन्वोएन भएमा भ्रस्ट्चार वा चोर बाटोबाट सेवा सुबिधा लिने प्रब्रिती झन बड्ने निस्चित छ किन भने ground realityजस्ले जती नै खोकेपनि सबैको घर चलाऊनै पर्‍यो,जनताको सेवा भनेर दिनरात बिना पारिस्रमिक खट्ने जनप्रतिनिधी कती नै होलान् र?
— Shova Poudel GC (@GcPoudel) October 19, 2019
एलपि पौडेलको भनाई पनि शोभा पौडेलको जस्तै छ । उनी पनि तलब पाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
मेरा कोही आफन्त पनि जनप्रतिनिधि छैनन् । म कुनै राजनितीक दलको कार्यकर्ता पनि हैन । र भविष्यमा राजनीति गर्ने मन पनि छैन तर जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक तोकिएबमोजिम स्वेच्छाले लिन पाउनुपर्छ ।
— LP Paudel (@laxmipaudellp) October 19, 2019
लेखक तथा विद्यार्थी नेता यादव देवकोटा पनि तलब दिन नहुन निर्णयको विरुद्धमा छन् ।
सर्वोच्चमा बसेर तलब खाने सरहरुले गाउँका प्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने लोकप्रिय निर्णय गरेछन्।तलब नखाएर घुस खाने भनेको हो ? स्थानीय प्रतिनिधिले कसरी जीविका चलाउँछन्?
सवाल त तलब लिग, भ्रष्टाचार नगर, खुरुखुरु काम गर भन्ने होइन र?
सस्तो लोकप्रियतावादले देशलाई घोषित लुटखानामा बदल्छ।
— Yadab Devkota (@gaunkomanchhey) October 19, 2019
अर्का ट्विटर प्रयोगकर्ता दिपेश कटुवालको तर्क पनि उस्तै छ । उनी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तलब नदिए प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई पनि तलब दिन नहुने तर्क गर्छ ।
स्थानिय निकायको प्रतिनिधिलाई तलव दिनु गलत हो भने प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा प्रदेश सभाको संसद अनि मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै जनप्रतिनिधी नै हुन उनिहरुलाइ चाहिँ किन तलव नि। जनप्रतिनिधि सवै समाज सेवा गर्‍छु भनेर लागेक हुन नि।
— दिपेश कटुवाल (@KatuwalDeepesh) October 19, 2019
नवीन शाहीले एक लाइनमा सर्वोच्चको निर्णयको प्रतिक्रियात्मक सार खिचेका छन् । उनी भन्छन्-
कि भ्रष्टाचार माैलाउछ, कि त जनप्रतिनिधि बाैलाउछ । दुइमध्ये एक निश्चित छ । #जनप्रतिनिधिकाे_तलब_राेक्का_सन्दर्भमा
— navin shahi (@navinshahi15) October 19, 2019